သင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး | Martech Zone
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ် အတည်ငြိမ်ဆုံးနှင့် ခန့်မှန်းနိုင်ဆုံးသော ပြန်လာနိုင်သည့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ချန်နယ်ကို ရှာဖွေသည့်အခါ၊ သင်သည် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းထက် ပိုကြည့်မည်မဟုတ်ပါ။ အတော်လေး စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အပြင် သင့်ကိုလည်း ပြန်ပေးတယ်။ ကမ်ပိန်းများတွင် သုံးသည့် $42 တစ်ခုစီအတွက် $1. ဆိုလိုသည်မှာ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ တွက်ချက်ထားသော ROI သည် အနည်းဆုံး 4200% အထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ဤဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်၊ သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ROI အလုပ်လုပ်ပုံကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်စေရန် ကူညီပေးပါမည် - နှင့် ၎င်းကို ပိုကောင်းအောင် မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်မည်နည်း။
Email Marketing ROI ဆိုတာဘာလဲ။
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ROI သည် သင့်အီးမေးလ်ကမ်ပိန်းများမှ သင်ရရှိသည့်တန်ဖိုးကို ၎င်းတို့အတွက် သင်သုံးစွဲသည့်တန်ဖိုးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ သင်၏ ကမ်ပိန်းသည် ထိရောက်သည့် အချိန်၊ မှန်ကန်သော မက်ဆေ့ချ် ပါဝင်ပြီး မှန်ကန်သော ဝယ်ယူသူများကို ဆွဲဆောင်သည့် အချိန် သို့မဟုတ် အခြား လက်တွေ့ကျသော ဗျူဟာကို ရပ်တန့်၍ စမ်းကြည့်ရန် အချိန်ကျလာသောအခါ ဤသည်မှာ သင်သိပုံ ဖြစ်ပါသည်။
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ROI တွက်ချက်နည်း။
ရိုးရှင်းသော ဖော်မြူလာဖြင့် သင်၏ ROI ကို တွက်ချက်နိုင်သည်။
ဆိုကြပါစို့၊ သင်သည် သင့်စာတိုက်ပုံးများကို ကောင်းစွာပြင်ဆင်ခြင်း၊ နမူနာပုံစံများရေးဆွဲခြင်းနှင့် သင့်အသုံးပြုသူများထံ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအီးမေးလ်များ ပေးပို့ခြင်းအတွက် ဒေါ်လာ 10,000 ဝန်းကျင်သုံးစွဲသည် - ၎င်းသည် သင်၏သုံးစွဲမှုတန်ဖိုး သို့မဟုတ် သင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးချန်နယ်တွင် သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် ငွေကြေးအရေအတွက်ဖြစ်သည်။
တစ်လအတွင်း သင့်ကမ်ပိန်းများမှတစ်ဆင့် ပြောင်းလဲလာသော ဖောက်သည်များထံမှ သင်သည် $300,000 ရရှိသည်။ ၎င်းသည် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကမ်ပိန်းများမှ သင့်ဝင်ငွေများ (ခေါ်) သင်၏ Gained Value ဖြစ်သည်။ သင့်တွင် အဓိကဒြပ်စင်နှစ်ခုကို သင်ရရှိထားပြီး မှော်ပညာသည် ယခုစတင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဖော်မြူလာက သင့်အား ပြသထားသည့်အတိုင်း၊ သင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကမ်ပိန်းမှ သင်၏ပျမ်းမျှ ROI သည် သင်ပေးချေသည့်တစ်ဒေါ်လာစီအတွက် $29 ဖြစ်သည်။ ထိုနံပါတ်ကို 100 ဖြင့် မြှောက်ပါ။ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုများတွင် $10,000 သုံးစွဲခြင်းသည် သင့်အား $2900 ရရှိစေသည့် 300,000% တိုးတက်မှုကို ရရှိစေကြောင်း ယခု သင်သိပါသည်။
Email Marketing ROI သည် အဘယ်အရာက အလွန်အရေးကြီးသနည်း။
ထင်ရှားသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိသည် - သင်ပေးသည်ထက်ပိုမိုရရှိကြောင်းသင်သိရမည်။ သင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ် နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းက သင့်အား အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။
သင့်ဝယ်ယူသူများ၏ တိကျသောပုံတစ်ပုံကို ရယူပါ။ မည်သည့် အီးမေးလ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး နည်းဗျူဟာ အလုပ်ဖြစ်သည်ကို သိသောအခါ၊ သင့်အလားအလာများကို မည်ကဲ့သို့ လှုံ့ဆော်ပေးသည်ကို သိပြီး ဝယ်ယူမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင့်ဝယ်ယူသူပုဂ္ဂိုလ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ဆေ့ချ်များကို ပြင်ဆင်ရာတွင် အမှားအနည်းငယ်လုပ်မိသည် - နှင့် အရောင်းလမ်းကြောင်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် အလားအလာများအတွက် လိုအပ်သောအချိန်ကို လျှော့ချပါ။
သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်အသွားအလာကို မြှင့်တင်ပါ။ သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ လည်ပတ်မှုများ ပိုမိုရယူလိုသောအခါ၊ SEO သည် ပထမဆုံး သတိရလာမည့် အရာဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ SEO သည် ရလဒ်များကို မောင်းနှင်ခြင်းမစမီ အချိန်နှင့် အလုပ်များစွာ လိုအပ်သည်။ အီးမေးလ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကမ်ပိန်းများသည် လက်ခံသူ တစ်ဦးစီအား တန်ဖိုးတစ်ခုခု ပေးခြင်း၊ သင့်အား ရှာဖွေရန် အားပေးခြင်းနှင့် သင်နှင့် သင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ရင်းမြစ်အားလုံးကို စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းဖြင့် သင့်အွန်လိုင်းပေါ်တယ်သို့ သင့်ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကို လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါသည်။
သင်၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကို အပိုင်းခွဲပါ။ သင့်အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်များကို သင်ပိုမိုနားလည်လေ၊ ပစ်မှတ်ထားသော အကြောင်းအရာကို ဖန်တီးရန်နှင့် အုပ်စုတစ်ခုစီအတွက် သီးသန့်တစ်ခုခုကို ကမ်းလှမ်းရန် သင့်အတွက် လွယ်ကူလေဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ဝယ်ယူသူအသစ်များ သို့မဟုတ် အချိန်ကြာမြင့်စွာ စာရင်းသွင်းထားသူများ ပါဝင်နိုင်ပြီး သင်သည် တုံ့ပြန်မှုအရှိဆုံးဖောက်သည်များကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး အတက်ကြွဆုံးဝယ်ယူသူများကို အားပေးနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် သင်၏ ဘာသာပြန်ဆိုမှုများနှင့် ကလစ်နှိပ်မှုနှုန်းများကို လွယ်ကူစွာ တည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ဖြစ်နိုင်ချေများကို ရှာဖွေပါ။ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကမ်ပိန်းများ၏ အမြတ်အစွန်းနှင့် အောင်မြင်မှုတို့တွင် Personalization သည် များစွာအရေးကြီးပါသည်။ Smarter HQ ၏ အဆိုအရ ဖောက်သည်များ၏ 72% ဝန်းကျင်သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအီးမေးလ်များနှင့်သာ အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်ကြသည်။
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ROI တိုးမြှင့်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ
မင်းရဲ့ ROI ကို ကျောက်တုံးမှာ မသတ်မှတ်ထားဘူးလား။ သင့်လျော်သောအစီအမံများကိုယူခြင်းဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်ပြီး တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် လုံလောက်သော ROI ကိုရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၊ သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုံ့ဆော်မှု၏ အရေးကြီးဆုံးအချက်များကို ရှာဖွေပြီး ၎င်းတို့ထဲသို့ ပိုမိုတန်ဖိုးထည့်ခြင်းဖြင့် သင်၏အောင်မြင်မှုကို တည်ဆောက်ရာတွင် စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပြီး၊ ရေပန်းအစားဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့အလင်းပြပါမည်။
အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် 1- ဒေတာ၏စွမ်းအားကို အသုံးချပါ။
သင်၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်များ၏ အတွေးအမြင်များကို သင်မဖတ်နိုင်ပါ - နှင့် telepathy ဖြစ်နိုင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ဆဲဖြစ်သည်။ သင်လိုအပ်သမျှသည် ဒေတာပေါင်းကန်နှစ်ခုတွင် တည်ရှိသည်။ နှစ်ခုလုံးသည် သင့်အတွက်ရရှိနိုင်ပြီး သင့်အလားအလာများ၏ အပြုအမူအတွက် အဖိုးတန်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများ ပါဝင်သည်။
ဝဘ်ဆိုက်လည်ပတ်သူဒေတာ။ သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ လာ၍ စာမျက်နှာတစ်ခုစီကို လေ့လာသောအသုံးပြုသူများသည် သင်၏အကောင်းဆုံးဖောက်သည်များဖြစ်လာနိုင်သည်- ၎င်းတို့စိတ်ဝင်စားသောအရာကို တွက်ချက်ကာ ၎င်းတို့လိုချင်သောအရာကို ပေးစွမ်းနိုင်စေရန် သင်စီမံပေးခြင်းဖြင့် သင်သည် သင်၏အကောင်းဆုံးဖောက်သည်များဖြစ်လာနိုင်သည်။ ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်၊ ၎င်းတို့၏ အဓိကပန်းတိုင်များ၊ ၎င်းတို့၏ လူဦးရေစာရင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ဦးစားပေးမှုများ၏ အကြမ်းဖျင်းရှိရန် လိုအပ်ပြီး သင်၏ပုံစံများကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် ထိုအသိပညာကို အသုံးပြုပါ။ သင်၏နေ့စဉ်ဧည့်သည်များကို Google Analytics မှတဆင့်လေ့လာနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့၏ဧည့်သည်များ ဘယ်ကလာသနည်း၊ တစ်ကြိမ်လာရောက်ကြည့်ရှုသူဖြစ်စေ နေ့တိုင်း သို့မဟုတ် အပတ်တိုင်း ပြန်လာသည်ဖြစ်စေ မကြာခဏကြည့်ရှုလေ့ရှိသည့် စာမျက်နှာကို ပိုမိုလေ့လာလိုသူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်လက်ထဲတွင် ထိုကဲ့သို့သော အချက်အလက်များဖြင့်၊ သင့်ပစ်မှတ်ပရိသတ်၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို မီးထိုးပေးပြီး ဧည့်သည်များကို စာရင်းသွင်းသူများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်ကို သင်ပိုမိုနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လှုံ့ဆော်မှုဒေတာ။ ယခင် ကမ်ပိန်းများက သင့်အား ပေးစွမ်းနိုင်သော အချက်အလက်များကို ဘယ်တော့မှ လျစ်လျူမရှုပါ။ အချို့သောကိရိယာများက သင့်ကိုပြသသည်-
သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကြည့်ရှုရန် အသုံးပြုသည့် စက်အမျိုးအစား၊
သင့်အီးမေးလ်များနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ရာတွင် အသုံးပြုသူများသည် အတက်ကြွဆုံးဖြစ်သည့်အခါ၊
ဘယ်လင့်ခ်တွေက အထူးခြားဆုံး ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးတာလဲ။
ပြောင်းလဲထားသော ဝယ်သူများမှ ပြုလုပ်သော ဝယ်ယူမှုများ။
ဤဒေတာသည် သင့်အား လက်ခံသူနှင့် သင်ကြားတွင် အတိကျဆုံးသော စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်မှုနှင့် လုံခြုံသော တက်ကြွသောဆက်သွယ်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ROI မြှင့်တင်မှုအတွက် နောက်အလေ့အကျင့်တစ်ခုဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် 2- ကြီးမြတ်သောပို့ဆောင်နိုင်မှုကို ဦးစားပေးပါ။
သင်၏ ပို့ဆောင်နိုင်မှုအပေါ် သင်မယုံကြည်မချင်း ROI အကြောင်း မပြောနိုင်ပါ။ သူ့ဟာသူ တည်ဆောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိရန် အကြောင်းရင်းများစွာကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပြီး သင်၏ ကမ်ပိန်းများသည် ရလဒ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည် ။ စာတိုက်ပုံးများ များများပို့လေ၊ စိန်ခေါ်မှုများ ပိုများလေဖြစ်သည်။
အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်မှုသည် သင့်လက်ခံသူများ၏ ဝင်စာပုံးများတွင် ရောက်ရှိလာသည့် အီးမေးလ်များ၏ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖော်ပြရန်အတွက် အသုံးပြုသည့်အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဝင်စာပုံးသို့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် လက်ခံသူမှတွေ့မြင်ရသည့် အီးမေးလ်များကို အဓိကထားသည်။ ဤသည်မှာ သင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကမ်ပိန်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်မှုမှာ အရေးကြီးပါသည်။
အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်မှုတွင် သင့်မက်ဆေ့ဂျ်ကို ပေးပို့ပြီး သင့်အောင်မြင်မှုအတွက် အထောက်အကူအဖြစ် မရေတွက်မီတွင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် ကျယ်ပြန့်သောအခြေအနေများပါရှိသည်။
ပေးပို့သူ နာမည်ပျက်။ ပေးပို့သူများစွာသည် အီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့နိုင်သော်လည်း ယုံကြည်ရဆုံးသူများသာ ၎င်းကို ၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်လက်ခံသူထံ အရောက်လှမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သော ပေးပို့သူ၏ဂုဏ်သတင်းသည် ကျန်းမာသောဒိုမိန်းတစ်ခုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော သီးခြားသတ်မှတ်ထားသော IP လိပ်စာ၊ တည်ငြိမ်သော၊ တသမတ်တည်းဖြစ်ပြီး တရားဝင်စာတိုက်ပုံးလုပ်ဆောင်ချက်မှ အရင်းခံပါသည်။
အထောက်အထားစိစစ်ခြင်း ပရိုတိုကောများ လက်ခံရရှိသည့် ဆာဗာများသည် ပေးပို့သူ၏လိပ်စာတွင် ဖော်ပြထားသော ဒိုမိန်းမှ အီးမေးလ်များ လာကြောင်းကို မဆုံးဖြတ်နိုင်သောအခါ၊ မက်ဆေ့ချ်သည် spam ဖိုင်တွဲသို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သော သက်သေခံကတ်ပြားသည် SPF မှတ်တမ်း၊ DKIM လက်မှတ်နှင့် DMARC မူဝါဒကဲ့သို့သော DNS မှတ်တမ်းများ လိုအပ်သည်။ အဆိုပါမှတ်တမ်းများသည် လက်ခံသူများအား ဝင်လာသောမေးလ်ကို စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြပြီး ၎င်းကို ဒိုမိန်းပိုင်ရှင်၏အသိပညာမပါဘဲ ခိုးယူခြင်း သို့မဟုတ် ပေးပို့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြရန် ကူညီပေးသည်။
ကောင်းမွန်သော အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်စွမ်းသည် သင့်အလားအလာ၏ ဝင်စာပုံးများသို့ မက်ဆေ့ချ်ပေးပို့ခြင်းတွင် မရပ်တန့်ပါ။ ၎င်းတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
ပျော့ပျောင်းပြီး မာကျောမှု အရေအတွက် နည်းပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင့်အီးမေးလ်များကို ပေးပို့ပြီးနောက် မကြာမီတွင် ဆာဗာပြဿနာများဖြစ်သည့် ယာယီပြဿနာများ၊ သင်၏ပေးပို့မှုဆိုင်ရာ ညီညွတ်မှုကို ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံသူအပြည့်အ၀ဝင်စာပုံး (သို့) သင်၏စာပို့စာရင်းတွင် ပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့် ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့ကို ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိမဟုတ်သော အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ ပေးပို့ခြင်း (ခက်ခဲစွာ ပြန်လာခြင်း)။ ပျော့ပျောင်းသော ဘောင်ဘီများသည် သင့် ISP ၏ ကောင်းမွန်သော ကျေးဇူးတော်များတွင် ရှိနေရန် သင့်အား နှေးကွေးပြီး ဂရုတစိုက် နင်းရန် လိုအပ်ပြီး ကြမ်းတမ်းသော ဘောင်ဘီများသည် ပေးပို့သူအနေဖြင့် သင့်ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ကောင်းမွန်သော အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ သင့်အီးမေးလ်များကို ပြန်မဖွင့်ကြောင်း သေချာစေရမည်။
အီးမေးလ်အများအပြားသည် Inbox သို့ တိုက်ရိုက်သွားခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ၎င်းတို့သည် အမှိုက်ပုံး ဖိုင်တွဲတွင် အကျုံးမဝင်ပါ သို့မဟုတ် စပမ်းထောင်ချောက်တစ်ခုမှ ဖမ်းမိသွားခြင်း မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့သောအရာများသည် အချိန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း ပေးပို့သူများသည် ၎င်းတို့၏ကယ်တင်နိုင်မှုကို မသိလိုက်ဘဲ ၎င်းတို့အား ထိခိုက်စေကြောင်း ထင်ရှားနေသေးသည်။
ဖွင့်လှစ်ထားသော အီးမေးလ်များ/အီးမေးလ် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုများ အများအပြား။ ဘယ်တုန်းကမှ မဖွင့်ထားဘူးဆိုရင် မင်းရဲ့ အီးမေးလ်ကို ပို့ရတာက ဘာများလဲ။ သင့်မက်ဆေ့ဂျ်များသည် တိကျသောပန်းတိုင်တစ်ခုကို လိုက်လျှောက်ကြပြီး ဤပန်းတိုင်ကို မအောင်မြင်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် သင့်ပေးပို့နိုင်မှုကို တစ်စုံတစ်ရာ ကွဲပြားစေမည်မဟုတ်ပေ။ သင်၏တာဝန်မှာ သင့်အလားအလာများသည် သင့်အီးမေးလ်များကို မြင်နိုင်စေရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုဖွင့်ကာ ၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကို အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားကြောင်း သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ROI ကိုမြှင့်တင်လိုပါက၊ သင့်ကိုယ်သင်မေးပါ-
ကျွန်ုပ်၏ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ ကျွန်ုပ်၏ အီးမေးလ်အတည်ပြုခြင်း ပရိုတိုကောများကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပြီးပြီလား။
ကျွန်ုပ်သည် လုံလောက်သော သွေးပူလှုံ့ဆော်မှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။
ငါ့အမြင်တွင် KPI များအားလုံးရှိပါသလား။
အမည်ပျက်စာရင်းများကို စစ်ဆေးရန် ကိရိယာရှိပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါက အချိန်ယူတယ်။ မြင့်မားသောပေးပို့နိုင်စွမ်းကိုရရှိရန်. သင်၏လက်ရှိရလဒ်များသည် ကောင်းမွန်သော ROI တစ်ခုရရန် လုံလောက်ပေသည်၊ သို့သော် သင်သည် ပိုကောင်း၊ ပိုမြန်၊ ပိုအားကောင်းလိုပါက၊ သင်၏တိုးတက်မှုကို စောင့်ကြည့်သင့်သည်၊ အပိုလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ရန် အသင့်ရှိနေပါ၊ သင်၏အပေါ် ဘယ်တော့မှ လက်မလျှော့ပါနှင့်။ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း.
အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် 3- အလွန်အာရုံစိုက်ထားသော အီးမေးလ်စာရင်းကို တည်ဆောက်ပါ။
ဤနည်းဗျူဟာသည် လုပ်ငန်းတစ်ခုမှ လုပ်ငန်းအတွက် အထူးသင့်လျော်သည် (B2B) အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး။ သင်သည် တစ်စုံတစ်ဦးထံ မက်ဆေ့ချ်ပို့သောအခါ၊ သင်သည် ၎င်းတို့အား မှန်ကန်သောလူဖြစ်လိုကြောင်း၊ သင်၏အချိန်နှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံပြီး သင့်ကမ်းလှမ်းချက်မှ အမှန်တကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတစ်ဦးအဖြစ် သင်သတ်မှတ်ထားသော ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်မလုပ်တော့ကြောင်း သိရှိရန်သာ အီးမေးလ်ပို့ပြီးနောက် အီးမေးလ်ပို့ခြင်းထက် ပိုဆိုးသောအရာမရှိပါ။ သင့်စာရင်းတွင် မသက်ဆိုင်သောလိပ်စာများ ပိုများလေ၊ သင်၏ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှုန်း လျော့နည်းလေဖြစ်သည်။
ပိုမိုသီးသန့်ဒေတာများနှင့်အတူစုဆောင်း အရောင်းထောက်လှမ်းရေးကိရိယာများ နှင့် စေ့စေ့စပ်စပ် သုတေသနပြုခြင်းဖြင့် သင့်ပေးပို့သည့်စာရင်းကို သန့်ရှင်းပြီး တန်ဖိုးရှိအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ပြီးပြည့်စုံသော ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများနှင့်တူသော လူများ၏ LinkedIn စာမျက်နှာများကို တက်ရောက်ခြင်း၊ အဆက်အသွယ်ဒေတာများကို စုဆောင်းခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အကြိုရောင်းချမှုအချို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ လူတိုင်းမှာ ဒီအတွက် အချိန်မရှိဘူး – သင့်မှာ အကူအညီပေးဖို့ ပြင်ပအဖွဲ့တွေ ရှိတာကောင်းပါတယ်။
အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် 4- ပုံစံတစ်ခုထက်ပိုသော ပုံစံနှင့် အသံကို အသုံးပြုပါ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်း ပြောရလျှင် သင့်လက်ခံရရှိသည့် ပရိသတ်၏ အပိုင်းတစ်ခုစီအကြောင်း သင်ပိုသိလေလေ၊ ၎င်းတို့၏ လေသံနှင့် ရွေးချယ်မှုအသံကို နားလည်လေဖြစ်သည်။ သင့်အလားအလာအချို့သည် ပိုမိုမြင်သာသောအကြောင်းအရာအပေါ်တွင် စွဲမြဲနေနိုင်ပြီး အချို့က ပို၍ပျော့ပြောင်းသောချဉ်းကပ်မှုကို နှစ်သက်ကြသည်။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည် သင့်အား ယုံကြည်ရလောက်သော ရောင်းချသူဟု မယူဆမီတွင် အသေးစိတ်သုံးသပ်ချက်များနှင့် ပညာပေးအကြောင်းအရာများစွာ လိုအပ်သော်လည်း အချို့သောအသုံးပြုသူများသည် ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုများနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ယုံကြည်ကြသည်။
အကြောင်းအရာသည် သင့်အား သင့်ကိုယ်သင် ဖော်ပြပြီး သင့်ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွာ ပြောဆိုနိုင်စေသောကြောင့် သင့်အလားအလာ၊ စာရင်းသွင်းသူများနှင့် ဖောက်သည်များအတွက် မတူညီသောအမျိုးအစားများအတွက် အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကို သင့်ကိုယ်သင်ခွင့်ပြုပြီး ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာအမျိုးအစားများတွင် လုပ်ဆောင်ရန် တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်။ မင်းနေသရွေ့တော့ သွားဖို့ကောင်းပါတယ်။ တင်းပလိတ်များ အီးမေးလ်ဖြန့်ဝေမှု လမ်းညွှန်ချက်များကို မချိုးဖောက်ပါနှင့်၊ spam အစပျိုးသည့် စကားလုံးများ ပါဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် မလိုအပ်သော လင့်ခ်များ ပြည့်လျှံနေပါစေ။
သင့်အီးမေးလ်၏ မည်သည့်ကဏ္ဍများကို အမြဲတမ်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသင့်သနည်း။
ဘာသာရပ်လိုင်း။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့၏ ဝင်စာပုံးများကို စစ်ဆေးသည့် လက်ခံသူတိုင်းအတွက် အာရုံစူးစိုက်မှု ဖမ်းစားသူဖြစ်သည်။ အထူးသီးသန့် ကတိပေးလေလေ၊ သင့်အီးမေးလ်ကို ဖွင့်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများလေဖြစ်သည်။ စစ်မှန်စွာသက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်လိုင်းသည် အနုပညာလက်ရာဖြစ်သည်- ၎င်းသည် အနှောင့်အယှက်မရှိ၊ အလွန်အကျွံရောင်းချခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် သင့်အား ထူးခြားသောတန်ဖိုး၏ကတိပေးချက်ဖြင့် သွေးဆောင်ကာ အီးမေးလ်ပေးပို့သူနှင့် ၎င်းတို့၏ပန်းတိုင်များနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ရှင်းလင်းပါသည်။
ပေးပို့သူအထောက်အထား။ သင့်လက်ခံသူများကို:name@gmail.com လိပ်စာတစ်ခုမျှသာ မပေးမိပါစေနှင့်။ သင့်အမည်၊ သင့်ခေါင်းစဉ်၊ သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် သင့်ဓာတ်ပုံတို့ကို ၎င်းတို့အား ပေးပါ။ သင်၏ပစ်မှတ်ပရိသတ် အပိုင်းကို မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သင်၏အလားအလာများသည် ၎င်းတို့နှင့်ဆက်ဆံနေပုံကို သိရပါမည်။ မင်းရဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာက သူတို့မြင်သမျှကို ဘော့တ်တစ်ခုနဲ့ စကားပြောနေတာလို့ ထင်လာနိုင်တယ်။
ရုပ်ပုံများ အသုံးပြုသူ၏ စိတ်ကြိုက်အရောင်များနှင့် ကိုက်ညီရန် သင့်အကြောင်းအရာကို အရောင်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် သင့်အီးမေးလ် နမူနာပုံစံကို ကျား-မအလိုက် ပိုမိုသတ်မှတ်ထားသော ဒီဇိုင်းကို ဖန်တီးနိုင်သည် (အဓိကအားဖြင့် သင်သည် သီးခြားကျားမတစ်ဦးကို ကျွေးမွေးသော ပစ္စည်းများရောင်းချပါက သို့မဟုတ် သီးခြားအုပ်စုအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများ ပေးဆောင်မည်ဆိုပါက)။ သို့သော် သတိထားပါ - အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုအားလုံး HTML ဖော်မတ်ကို မပံ့ပိုးပါ။
ဗန်းစကားနှင့် ကျွမ်းကျင်သော ဗန်းစကား။ သင့်လက်ခံသူများ လုပ်ကိုင်နေသော စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် နယ်ပယ်များအကြောင်း သင်သိသောအခါ၊ ၎င်းတို့အတွက် ခေါင်းလောင်းသံဖြစ်စေသည့် ထိုဝေါဟာရကို သင်နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် ၎င်းတို့၏နေ့စဉ်ပြဿနာများကို အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီး ၎င်းတို့၏ဦးစားပေးမှုများကို သိရှိကြောင်းပြသခြင်းဖြင့် သင့်ပုံစံပလိတ်များတွင် ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့် 5- သင်၏ ဖြန့်ဝေမှုကို မိုဘိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထားပါ။
စိတ်ကြိုက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာ မိုဘိုင်းခေတ်ကို အသိအမှတ်ပြုသင့်ပါသည်။ လူများသည် သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာနှင့် ဖျော်ဖြေရေးလောကသို့ ပေါ်တယ်အဖြစ်အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းများနှင့် ဂက်ဂျက်များကို မပါဝင်ကြပါ။ ဝယ်ယူသူများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များသည် ဝယ်ယူမှုများပြုလုပ်ရန်၊ ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းအသွားအလာကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် အီးမေးလ်စစ်ရန် ၎င်းတို့၏စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုကြသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အီးမေးလ်များကို စမတ်ဖုန်းမှ မကြည့်နိုင်ပါက အလားအလာရှိသော ဝယ်ယူသူအများအပြားကို သင် လက်လွတ်ဆုံးရှုံးစေပါသည်။ ပျမ်းမျှအသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းမှလွဲ၍ အီးမေးလ်တစ်စောင်ကို အပ်လုဒ်လုပ်ရန်3စက္ကန့်ထက် ပိုကြာပါက သို့မဟုတ် ၎င်း၏ဖတ်နိုင်မှုမှာ ကျေနပ်ဖွယ်ထက်နည်းပါက ၎င်းတို့သည် ၎င်းကိုချက်ချင်းပိတ်ပြီး အခြားပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ထားသော မက်ဆေ့ဂျ်များဆီသို့ ရွှေ့သွားမည်ဖြစ်သည်။
သင့်မက်ဆေ့ဂျ်များသည် မိုဘိုင်းလ်အတွက် အဆင်ပြေကြောင်း သေချာစေရန်၊ သင့်ဝဘ်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူနှင့် အနုပညာဒါရိုက်တာတို့က ၎င်းတို့ကို ကြည့်ရှုခွင့်ပေးကာ ၎င်းတို့ကို မည်သို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး သင့်ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကို ပိုမိုနှစ်သက်စေမည်ကို ကြည့်ရှုပါ။
အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် 6- Email Marketing Automation ကိုသုံးပါ။
ဤအလေ့အကျင့်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ စားသုံးသူများအတွက် အရေးကြီးသည် (B2Cအထူးသဖြင့် e-commerce ထွန်းကားလာသောအခါတွင် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာများ။ ဒါက ဘာကြောင့်လဲ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက် အင်္ဂါရပ်များကို အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအများအပြားက ပေးဆောင်လေ့ရှိသည် (ESPs များ) ဤအင်္ဂါရပ်များက၎င်းကိုဖြစ်နိုင်စေသည်-
အီးမေးလ်များကို အချိန်ဇယားဆွဲပါ။ သတင်းလွှာများနှင့် ပရိုမိုးရှင်းမက်ဆေ့ချ်များ ပေးပို့ရန် ထိုင်စောင့်နေရတာ ငြီးငွေ့နေပြီလား? ရန်မလိုပါ။ အလိုအလျောက်စနစ်ဆက်တင်များသည် သင့်အား မှန်ကန်သောအချိန်အပေါက်ကိုရွေးချယ်ရန်၊ အဆက်အသွယ်စာရင်းကိုထည့်သွင်းရန်နှင့် မက်ဆေ့ချ်များသည် သင့်လက်ခံသူများ၏စာတိုက်ပုံးများသို့ နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ ရောက်ရှိလာမည်ကိုသိ၍ လွယ်ကူစွာအနားယူနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
ငွေပေးငွေယူအီးမေးလ်များကို စနစ်ထည့်သွင်းပါ။ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း အင်္ဂါရပ်များသည် သုံးစွဲသူများ၏ ဝယ်ယူမှုမှတ်တမ်းကို ခြေရာခံပြီး ငွေတောင်းခံလွှာများ၊ အတည်ပြုချက်အီးမေးလ်များ၊ အကြောင်းကြားချက်များ၊ နှင့် သတိပေးချက်များ ထုတ်ပေးသည့် ဝယ်ယူသူတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ ဝယ်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် အဆုံးသတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဆက်လက်အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်နိုင်စေခြင်းတို့ကို ထုတ်ပေးပါသည်။
စွန့်ပစ်ထားသော တွန်းလှည်း အသိပေးချက်များကို ပေးပို့ပါ။ ဤမက်ဆေ့ချ်အမျိုးအစားသည် ၎င်းတို့၏စိတ်မ၀င်စားသော ဝဘ်ဆိုက်လာရောက်သူများကို သင့်အား ပြန်လည်ဖမ်းယူနိုင်ရန် ကူညီပေးသည့် အစွမ်းထက်သော ပြန်လည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုကို ပကတိဈေးဝယ်လှည်းသို့ ပေါင်းထည့်လိုက်သော်လည်း နောက်ထပ်မယူသည့်အခါတိုင်း၊ စွန့်ပစ်ထားသော ဈေးဝယ်လှည်းအီးမေးလ်များသည် သုံးစွဲသူများအား အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် တွန်းအားပေးပြီး ၎င်းတို့၏ရွေးချယ်မှုသည် အရေးကြီးကြောင်း ပြသသည့်အခါတိုင်း အစပျိုးသည်။
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ROI သည် သင့်အား အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းပြမြေပုံဖြင့် သင့်တိုးတက်မှုကိုပြသနိုင်သည့် အဖိုးတန်ပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်သော KPI တစ်ခုဖြစ်သည် - နှင့် စိန်ခေါ်မှုများမည်မျှရှိမည်နည်း။ ၎င်းသည် သင့်အား အရောင်းလမ်းကြောင်းများကြားတွင် သင့်ငွေကို တတ်နိုင်သမျှ ထိရောက်စွာ ဖြန့်ဝေနိုင်စေပြီး ပိုမိုကြိုးစားရန် အားပေးပါသည်။
ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော အလေ့အကျင့်များသည် သင်၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်စေရန်နှင့် သင်၏ လက်ရှိရလဒ်များကို ကျော်လွန်သွားစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ သင့်ကမ်ပိန်းများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး သင့်ထံအသေးစိတ်အချက်အလတ်များမကျန်စေရန် သေချာစေရန်၊ သင်၏အလေ့အကျင့်များနှင့် အတူကြိုးစားရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဖိုလ်စိတ်. ၎င်းသည် spam ပြဿနာများကိုအမှန်တကယ်ဖြေရှင်းခြင်း၊ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီနေရာချထားမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ အဓိက ESP များနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်အခြားအရာများနှင့်အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်မှုစမ်းသပ်ခြင်းတို့ကိုပေါင်းစပ်သည့်ပလပ်ဖောင်းဖြစ်သည်။
ကံကောင်းပါစေ၊ ROI ၏အင်အားသည် သင်နှင့်အတူရှိပါစေ။
Folderly Demo ကို စီစဉ်ပါ။
ထုတ်ဖော်: Martech Zone နှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဖိုလ်စိတ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဆောင်းပါးတစ်လျှောက်လုံး ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ညွှန်းလင့်ခ်ကို အသုံးပြုနေပါသည်။
Tags: စျေးဝယ်လှည်းကို စွန့်လွှတ်ကြောင်း အသိပေးချက်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းb2b အီးမေးလ်b2cb2c အီးမေးလ်လှုံ့ဆော်မှုဒေတာပို့ဆောင်ရေးအီးမေးလ်ကအီးမေးလ်ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။အီးမေးလ် ctrအီးမေးပို့နိုင်မှုအီးမေးလ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအီးမေးလ်ကစာရင်းအီးမေးလ်စျေးကွက်အီးမေးလ်ဖွင့်လှစ်အီးမေးလ်အီးမေးလ်အီးမေးလ်အချိန်ဇယားအီးမေးလ်အပိုင်းအီးမေးလ်စတိုင်အီးမေးလ်အကြောင်းအရာလိုင်းအီးမေးလ်တင်းပလိတ်များအီးမေးလ်လေသံအီးမေးလ်ပုံရိပ်များအီးမေးလ်ပူနွေးမှုESPhard bouncesInbox နေရာချထားမှုip နွေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်မိုဘိုင်းအီးမေးလ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာရွယ်ရောင်းအားထောက်လှမ်းရေးအရောင်းမြှင့်တင်ရေးအီးမေးလ်များကို အချိန်ဇယားဆွဲပါ။ပေးပို့သူအထောက်အထားပေးပို့သူဂုဏ်သတင်းsoft bouncesအရောင်းအဝယ်အီးမေးလ်များဧည့်သည်ဒေတာ
Backlinking ဆိုတာ ဘာလဲ သင့် Domain ကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေဘဲ Quality Backlinks ကို ဘယ်လိုထုတ်လုပ်မလဲ။
ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း၊ အစည်းအဝေးနှင့် Podcasting အတွက် ကျွန်ုပ်၏ ပင်မရုံးစားပွဲနှင့် နည်းပညာ